बस एक्कासि घुम्तीमा नमोडी भिरमा झर्‍यो, चालकले फाल हान भन्दै कराए – Nep Stok
फागुण २६, २०७८ बिहिबार 804
सधैँ झैँ बिहीबार बिहान सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका वडानं. ४ का २४ वर्षीय सुवास गोले बसमा चढेका यात्रुहरूको टिकट का’ट्न थाले ।बिहान ६ः४५ बजे मादीको ओखरबोटेबाट बा ४ ख ७३५ नम्बरको रेसम फिलिलि नामक बस १९ यात्रु लिएर झापाको दमक तर्फ प्रस्थान गर्‍यो ।
बसका चालक थिए तेह्रथुम औशीडाँडाका विपिन निरौला । सधैँ झैँ आ आफ्नो जिम्मेवारीमा तल्लीन ओखरबोटेका बुकिङ सुवास गोले यात्रुसँग टिकट काट्न व्यस्त थिए ।एक्कासि बसको गति वि’ग्रिएझै लाग्यो । सुवासले बसको पछिल्लो सिट तिर टिकट का’ट्दै गर्दा अगाडी आएर चालक विपिनलाई सोधे ।
के भयो ? विपिन बोलेनन् । उनी निक्कै आ’त्तिएको देखिन्थे ।दु’र्घटना भएको स्थान भन्दा अढाई सय मिटर माथि देखि बसको स्पिड बढेको थियो । सुवास पछिल्लो भागमा यात्रुसँग टिकट का’ट्दै थिए ।बस एक्कासि घुम्तीमा नमोडी भिरमा झर्‍यो ।करिब अढाई सय मिटर तल झरेपछि बस रुखमा अ’डकीयो । चालकले सुवासलाई फाल हान हान भन्दै कराए ।
चालक विपिन र बुकिङ सुवास सँगै बसबाट फाल हाने । तर बस चालक विपिन फाल हाने पनि बाचेनन् । उनी फाल हानेकै तिर बस खस्यो । उनलाई बसले कि’च्यो र चालकको मृ’त्यु भयो ।सुवास भने-अहिले उपचारको क्रममा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छन् ।
उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्यउन्मुख भइरहेको छ । बस दु’र्घटना हुनुको कारण बसको पत्ती भाँ’चिएकोले भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । बस दु’र्घटना भएको खबर पाएका सुवासका आफन्त बेनु तामाङ घ’टनास्थल आइपुग्दा बीभत्स अवस्था थियो ।
बेनुले भने बस खसेको ठाउँ र बसको अवस्था हेर्दा बसमा सवार कोही पनि बाँचेनन् भन्ने लागेको थियो । बसको हुट थिएन । यत्रतत्र मृ’तकको श’वहरू छ’रिएका थिए । एक दुई जना भित्तामा समाएर छटपटीरहेको बताउँदै बेनुले भने, बस झरेको ठाउँ सम्म पुग्न सडकबाट आधा घण्टा लागेको थियो ।
बस भिरमा ख’सेको अवस्था हेर्ने हो भने साँच्चै वि’भत्सा अवस्था थियो । बल्ल तल्ला जीवित रहेका घा’इतेहरूलाई उद्धार गरिएको बताउँदै मादी नगरपालिकाका मेयर विदुर लिङ्थेपले भने पक्कै केही न केही टेक्निकल फल्टकै कारण दु’र्घटना भएको हुनसक्छ ।मेयर लिङथेप पनि अहिले बीपीमै घा’इतेहरूसँग रहेका छन् ।
प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार मृत्यु हुनेमा मादी नगरपालिका ६ बस्ने वर्ष नखुलेकी अञ्जना कटवाल, सोही नगरपालिका वडानं. ५ बस्ने वर्ष ४५ को दीपक दाहाल, मादी ६ का वर्ष ३८ को इन्द्र बहादुर अधिकारी, मादी ४ बस्ने वर्ष ३५ को उमेश भट्टराई (सहचालक),
मादी ४ बस्ने वर्ष ३८ को आइत बहादुर तामाङ, मादी ४ बस्ने वर्ष ३५ कि सबिता राउत कार्की, मादी ५ बस्ने वर्ष ५०/५२ को श्याम शेर्पा, मादी ५ बस्ने वर्ष ५५ को भवानी दाहाल, मादी ६ बस्ने तुलसा कटवालकी छोरी वर्ष ५ कि दीक्षा कटवाल, तेह्रथुम औशीडाँडा बस्ने वर्ष ३०/३५ को
विपिन निरौला चालक सवारी धनी र बीपीमा उपचारको क्रममा मादी नगरपालिका ५ की ३० वर्षीय यूका पोखरेलको मृ’त्यु भएको छ । सो दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका नाम थर ठेगाना नखुलेको १ पुरुष, २ महिला, १ बालक गरी ४ जनाको स’नाखत हुन सकेको छैन ।
अहिले ४ जना घा’इतेको बीपीमा उपचार भइरहेको छ । बस सडकबाट करिब ३ सय मिटर तल ख’सेको थियो । मृ’तकहरुको श’व चैनपुर अस्पतालमा राखिएको र उनीहरूको पो,’स्टमार्टम पछि मृतकका आफन्तलाई बुझाउने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी लालध्वज सुबेदीले बताए ।
Prevपल शाहलाई अर्को धक्का
Nextश्री पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस् ।